धनि र पहँुचवालाका लागि अवसर गरिबका लागि नियमGandaki Press
धनि र पहँुचवालाका लागि अवसर गरिबका लागि नियम
निषेधाज्ञा तोडेर लायन्स देखि कानुन व्यवसायीसम्मको कार्यक्रम प्रशासन मौन
साउन २४, २०७८ १६:२० मा प्रकाशित
पोखरा २४ साउन । यतिवेला फेसबुकभर निकै धेरै कार्यक्रम गरिएको फोटोहरु देख्न सकिन्छ । कतै विरोध गरिएको फोटोहरु त कतै कार्यक्रम गरिएका फोटोहरु ।
कोरोना महामारीले तिव्र रुप लिइरहेको अवस्थामा राज्यले निषेधाज्ञा गरिरहेकै छ । निषेधाज्ञा गरिरहँदा भिडभाड, भेला, महोत्सव लगायत कुनैपनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
तर, त्यो निर्देशन कस्का लागि ? के का लागि ? यो प्रश्नमा जवाफ हुने गर्दछ सबै नागरिकका लागि । जवाफ अनुसार पोखरामा भने भेटिदैँन् । पोखराको मात्र कुरा होइन् देशका कुनैपनि भागमा भेटिदैँन् ।
भेटिन्छन असाह्य, गरिब र ज्याला मजदुरी गर्ने माथिमात्र कानुन लागेको । हो कास्कीमा यस्तै भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
जसअनुसार भिडभाड,मेला महोत्सव, सेमिनार तथा कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ । २७ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा गरिएको छ । तर, त्यो निषेधाज्ञा भने कम्जोर र पहुँच नहुनेका लागिमात्र देखिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सामाजिक दुरी कायम राख्न बारम्बार सुचना दिदैँ आएको छ । उता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि भिडभाड नगर्न आग्रह गरिहेको छ ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउँने संकेत गर्दै कक्षा १२ को समेत परीक्षा स्थागित गर्न पत्राचार गर्‍यो । परीक्षा स्थगित भयो । पोखरामा सामाजिक संस्था भनाउँदा पोखरा लायन्स अन्तराष्ट्रिय गण्डकी धवलागिरीले भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्‍यो ।
प्रशासनकै धज्जी उडाउँदै भिडभाड गर्दै कार्यक्रम सफल गरेको छ । उल्लङघन गरेको कार्यक्रममा नेपाली चलचित्रका सफल नायक राजेश हमालको समेत उपस्थिति देखिएको थियो ।
लायन्स क्लब अन्तराष्ट्रिय गण्डकी धौलागिरीले पोखरामा रहेको माउन्ट ग्लोरी फरेस्ट रिसोर्टमा ठुलो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पनि पोखरामा सातै प्रदेशका प्रादेशिक प्रमुख, शाखा प्रमुख, कर्मचारी, अभिकर्ताहरू समेतको सम्मेलन सकिएको गण्डकी प्रदेश प्रदेश प्रमुख टुल्क नाथ आचार्यले सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका छन ।
लायन्स क्लब, ईन्स्योरेन्स कम्पनी त एउटा उदाहरण मात्र हो । त्यो बाहेक पोखरामा विभिन्न संघ संस्थाले यसरी नै कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् ।
आइतवार मात्रै उच्च अदालत पोखरा बार एशोसियसनले बधाइ तथा सम्मान कार्यक्रम राख्यो जहाँ सामाजिक दुरी पालना गरिएको थिएन । यस्ता कार्यक्रम चलिरहँदा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाइ कुनै जानकारी नै छैन ।
स्रोतका अनुसार प्रशासनले रोक लगाउने डरले नै लायन्स क्लबले पोखरा १७ दोविल्ला स्थित रहिचौरको जंगलमा रहेको माउन्टेन ग्लोरीमा कार्यक्रम गरेको हो । जहाँ पोखराबाट पुग्न करिब १५ देखि २० मिनेटको समय लाग्ने गदर्छ ।
उक्त रिसोर्टमा विवाहहरु समेत हुदैँ आएको छ । व्यवसायको लोभले रिसोर्टले समेत निषेधाज्ञाकै उल्लङघन गर्दै आइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले कार्यक्रमबारेमा आफुहरुलाइ कुनै जानकारी नभएको बताए ।
‘जिम्मेवार संस्थानै गैर जिम्मेवारी तरिकाले काम गर्नु सुखद् कुरा होइन् । हामिलाइ कुनै पत्तो भएन । कार्वाहि हुन्छ, रोगबाट प्रशासन जोगिने होइन प्रहरी जोगिने होइन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले भने,‘नियमको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।
कोभिडबाट जोगिन सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै रहिआएको छ । सबै सचेत भएनौ भने हिजोकै हालत हुन्छ ।’